XOG XASAASI + DHAGEYSO: Maxaa ka ogtahay mas’uuliyiintii maanta gaaray Kismaayo, xilli DF Somaliya ay qaaday xayiraadii?! ‘ | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG XASAASI + DHAGEYSO: Maxaa ka ogtahay mas’uuliyiintii maanta gaaray Kismaayo, xilli...
XOG XASAASI + DHAGEYSO: Maxaa ka ogtahay mas’uuliyiintii maanta gaaray Kismaayo, xilli DF Somaliya ay qaaday xayiraadii?! ‘
Madaxdii hore ee Soomaaliya oo maanta gaaray Kismaayo
Kismaayo (Halqaran.com) – Waxaa magaalada Kismaayo khamiistii maanta gaaray qaar ka mid ah madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya, madaxweynaha maamulka Puntland, iyo hoggaamiyayaasha xisbiyada mucaaradka dalka.
Xubnaha maanta Kismaayo gaaray waxaa ka mid ah, Shariif Sheekh Axmed, Xasan Sheekh, Saciid Deni iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Wafuudaas kala duwan ayaa Kismaayo uga qeyb-galaya calaamo saarka madaxweynaha Jubaland ahmed Axmed Madoobe, oo doorashadiisa ay dowlada dhexe ku tilmaantey sharci darro.
Sidoo kale, waxaa muuqaneysa in dowladu qaadey xayiraadii ay ku soo rogtey siyaasiyiinta dooneysey in Kismaayo u safraan.
Haddaba maxaa keeney in dowladda ay qaado xanibaaddaas? Sidoo kale xal iyo isku soo dhawaansho ma keeni karaan siyaasiyiinta Kismaayo isugu tagay? Weriyaha Laanta Af Soomaaliga ee VOA-da Falastiin Axmed Iiman ayaa warbixintan ku eegeysa arrimahaas.
Halka Hoose ka dhageyso Warbixin Xiiso gaar ah leh:
Caleema saarka Axmed madoobe
Mas'uuliyiin tira badan oo gaaray Kismaayo